Sony Xperia J (ST26i) 11.0.A.7.5 ကို Root လုပ်မယ် - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Rooting SONY Sony Rooting နည်းလမ်းများ Sony Xperia J (ST26i) 11.0.A.7.5 ကို Root လုပ်မယ်
Sony Xperia J (ST26i) 11.0.A.7.5 ကို Root လုပ်မယ်
Maung Pauk at 6:19:00 PM Rooting, SONY, Sony Rooting, နည်းလမ်းများ,
စိုင်းကြီး: ကိုပေါက်ရေ(ရုပ်ရှင်မင်းသားလားမသိဘူး :D ) Xperia J ကို root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းလေးရှိရင် ကူညီပေးပါဦးဆိုင်မှာလုပ်ရင်ပိုက်ဆံလဲကုန်တယ် ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလဲကလိချင်လို့ ပါ ဟိုတစ်လောတုန်းကလဲ မေးလ်ပို့ထားပါတယ်အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ထင်လို့ ထပ်မပို့ တော့တာပါ
Sony Xperia J (ST26i) ကို Root လုပ်တဲ့နည်းတွေ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရလို့ ကျွန်တော် မတင်ပေးဖြစ်တာပါကိုစိုင်းရေ.. နည်းလမ်းကလည်း အဆင်ပြေတော့ သူတို့ဆီကဟာကိုပဲ ကျွန်တော် မျှဝေပေးလိုက်တော့မယ်..
ပထမကျွန်တောတွေ့တာက မြန်အောင်သားဆီမှာပါ.. သူက ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြထားပါတယ်..
Sony Xperia J (ST26i) 11.0.A.7.5 ကို Root လုပ်နည်း
အရင်က လာတဲ့ Sony Xperia J တွေရဲ့ build number က 11.0.A.3.28 ပါ။ အဲဒီတုန်းက root with restore v18 နဲ့ root လုပ်ရင်ရပါတယ်။ အခု build number က 11.0.A.7.5 ပါ။ ဒါကြောင့် root with restore v18 နဲ့ root လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ firmware ကို 11.0.A.3.28ဖြစ်အောင် flash လုပ်ပြီး root လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
1. Download Flashtool v0.9.10.1
3. Download Sony Xperia J Driver
4.Download Root with Restore v18 by myanaungtharr.7z
ကဲဒေါင်းလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ စပြီး Root ကြရအောင်ဗျာ။
ပထမအဆင့်က firmware ကို 11.0.A.3.28_WE.ftf ဖြစ်အောင်flash လုပ်တာပါ၊
ဒုတိယအဆင့်က Root လုပ်တာပါ။
၁။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ flashtool v0.9.10.1 ကို computer မှာ Install လုပ်ပါ။
၂။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ ST26i_11.0.A.3.28_WE.ftf ကို C:\_Flashtool\_firmwares ထဲကိုကူးထည့်ပါ။
၃။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ Xperia J driver ကို extract လုပ်ပြီးအထဲကST26.ftd ကို C:\_Flashtool\_devices ထဲကိုကူးထည့်ပါ။
၄။ ဖုန်းထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ Setting>Develper Options>usb debugging ကို on လိုက်ပါ။Settings>Xperia>Connectivity>USB connection mode>msc mode ကိုပြောင်းပေးပါ။
၅။ C:/Flash Tool/Flash Tool.exe ကို right click နှိပ်ပြီး Run as administrator ဆိုပြီး run လိုက်ပါ။ ပုံထဲက ပြထားတာတွေအတိုင်းအဆင့်ဆင့်လုပ်သွားလိုက်ပါ။
၆။ ဖုန်းကို ဘက်ထရီဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်ပါ။ Volume (-)ခလုတ်ကို ဖိထားပြီး ကွန်ပျူတာမှာ usb ကြိုးနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။အောက်ကပုံလေးတွေကိုကြည့်ပါ။
ကဲ...ဒါတွေပြီးရင်တော့ firmware ကို ST26i_11.0.A.3.28 ဖြစ်အောင် flash လုပ်လို့ပြီးပါပြီ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Root with Restore V18 နဲ့ root လုပ်လိုက်တော့ဗျာ။
ST26i_11.0.A.7.5 ကို ပြန်ပြီး flash လုပ်ချင်ရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းပါခင်ဗျာ။
Credit to မြန်အောင်သား
နောက် တစ်ခုက Free Mobile Sharing က Min Khant ရေးတဲ့ပို့စ်ပါ.. သူရေးတဲ့ပို့စ်ကို MMSD မှာတောင်တွေ့ပါတယ်..
ပျင်းနေတာနဲ အိပ်လို မပျော်လို စာထရေးလိုက်တာပါ...sony j ကို root လုပ်ပုံရဲ မူရင်လင့်ကတော့ XDA မှာပါ..သူရေးထားတဲ အတိုင်းကျွန်တော် လုပ်တာ ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲအောင်မြင်စွာ လုပ်နိုင်ခဲလို ပြန်ပီးမျှဝေတာပါ...
ကဲ.....ပထမဦးဆုံး ဖုံးက သူတိုပြောထားတဲ firmware တင်မှရပါမယ်တဲ့...အဲဒီ firmware လေးက်ု ဒေါင်းပီး flashtool နဲ flash လိုက်ရင်ရပါပီ......သူရဲ firmware တော့
flashtool.exe အတွက်ကတော့ dOwNlOaD
sony j အတွက် driver DoWnLoAd
အခုစပီးတော့ သူပေးထားတဲ firmware ကို flash လုပ်ရမှာပါ...ပထမဦးဆုံး ဒေါင်းလို ရလာတဲ့ flashtool.exe ကို ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ......ပီးသွားရင် သင်ကွန်ပျူတာရဲ C: ထဲမှာ flashtool ဆိုတဲ folder လေးရောက်နေတာတွေရပါလိပ်မယ် .......အဲဒီ folder လေးကို ဖွင်လိုက်ရင်fileတွေ၁၂ ခုတွေပါလိပ်မယ် အဲဒီထဲက firmware ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဖွင့်ပီး ခုဏကဒေါင်းထားတဲ့ firmware (ST26i_11.0.A.3.28_WE.ftf) ဖိုင်လေးကို ဆွဲထည်လိုက်ပါ.
.နောက်ထပ်ပြဿနာလေးတခု ရှိတာက အခုတင်ပေးထားတဲ့ flashtool က sony j အတွက် driver မပါပါဘူး.......အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တိုက သူအတွက် driver ထပ်သွင်းပေးရပါမယ်
driver အတွက်တော့ ( sony j အတွက် driver ).အဲဒီကောင်လေးကို zip ဖြေပီးတော့ C>FLASHTOOL>DEVICES ထဲကိုထည့်လိုက်ပါ..
.ကဲဗျာ စပီးတော့ flash ရအောင် flashtool ကို run လိုက်တော့ဗျာ ........flash ဆိုတာလေးကိုနိပ်လိုက်ရင် ခုဏကကျွန်တော်တိုသွင်းထားတဲ့ ftf ဖိုင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့ ပီနောက် ok ပေါ့...သူဘာသာအလုပ်လုပ်နေပါလိပ်မယ် ပီးရင် ဖုံးကို back ခလုပ်နိပ်ခိုင်းပီး flash mod နဲ ဝင်ခိုင်းလိပ်မယ်...အဲဒီမှာပြဿနာ အဲဒီဖုန်းကsony j က back ခလုပ်မပါဘူး..ကိစ္စမရှိပါဘူး......ကဲ ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်ပါ .....ထိုနောက် အသံ အတိုး အကြယ် ခလုပ်ရဲ အောက်ဘက် ကို နိပ်ပီး USB ကြိုးတပ်ပီး flash mod ဝင်လိုက်ပေါ့.အကုန်းလုံးပီးတဲ့အထိစောင့်ပါ ပီးရင် ဖုံးကိုပါဝါဖွင် active လုပ်လိုက်ပေါ့..
ကဲစပီး root လိုရပါပီ.....root တာကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါဘဲ.ကျွန်တော်ပေးမယ်လင့်ထဲ့ က ဟာလေးကိုအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ dOwNlOaD
ပီးရင် zip file လေးကိုဖြေလိုက်ပါ. ကဲအခု ဖုံးမှာနဲနဲလေးပြင်မယ်.setting>devolpment settings>usb debugging ကိုအမှန်ချစ်လေးပေးလိုက်ပါ.ကဲဖုံးနဲ့ ကွန်ပျူတာနဲတပ်လိုက်ပါ.(ကွန်ပျူတာမှာတော sony ဖုံးသုံးတဲ့လူတွေအားလုံး pc companion လေးတော့သွင်းထားမယ်ထင်ပါတယ်)
root J (zip ဖြေထားတဲ)ဖိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ..အဲဒီနောက် Runme.bat ဆိုတဲ့ file လေးကို ကလစ်နစ်ချက်နိပ်လိုက်ပါ.....normal (1) ဆိုတာလေးနိပ်ပေးလိုက်ပါ...ပီးသွားရင်ဖုံးမှာ restore လုပ်ခိုင်းလိပ်မယ် လုပ်လိုက်ပါ...ပီးသွားရင်ဖုံးထဲ မှာ super su ဆိုတာလေးရောက်နေပါပီ..အောင်မြင်စွာ root ပီးသွားပါပီ......
.ထပ်ကလိချင်သေးရင်တော CWM လေးသွင်းကြည်လိုက်ပါ....CWM အတွက် တော့ dOwNlOaD
အဲဒီမှာဒေါင်းလိုက်ပါ.ပီးရင် zip ဖြေ install.bat ဆိုတာလေးကို ကလစ်၂ ချက်နိပ်လိုက်ရင်ရပါပီ...( CWM ကိုဝင်ချင်ရင်တော ဖုန်းကို ပိတ် usb ကြိုးတတ်ပီး power ဖွင့် sony ဆိုတဲစာသားလေးရောက်ရင်..volume down ကိုနိပ်ပီးဝင်ပါ) အားလုံးပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေ
Credit to : Free Mobile Sharing
သူရေးထားတဲ့လင့်မှာရော. MMSD မှာပါ. CWM ကို ဒေါင်းဖို့ လင့် မတွေ့ပါဘူး..
Rooting, SONY, Sony Rooting, နည်းလမ်းများ
Rooting SONY Sony Rooting နည်းလမ်းများ
ICS Root Unlocker ဖြင့် Android Phone များကို Root...
Easy Rooting Toolkit လေးနဲ့ Sony Xperia Series နဲ့...
Memory Stick ကိုလုံခြုံအောင်ထားပေးမဲ့ USB Secure 1...
ဇာတ်တော်ကြီး (၁၀)ဘွဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် စာအုပ်
Google Play ကို ၀င်ရောက်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူများအတွက်
မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုလျှင် သတိထားရန် အချက်များ
Screen Resolution ထဲက 4K Resolution ဆိုတာ ဘာလဲ
Fakewebcam 7.1 Full Version
Shortcut Icon ပြသနာအကျယ်ရှင်းလင်းချက် ( ဖြေရှင်းနည...
HUAWEI T8100 Android ဖုန်း V2.2.2 အတွက် Root လုပ်နည်း
Huawei Y310-5000 Root
Google မှာ Pro တစ်ယောက်လို ရှာနည်း
Blue Screen Error Page ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
AVG 2013 Complete Collection Ultimate Mega Pack 2013
iDevice တွေအတွက် app တွေရယူနိုင်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွ...
ALL CHINA MOBILES CODE (China Phone Secret Code များ)
မြန်မာမှာမမြင်ဘူးသော Phone ရဲ့ internet Speed ကို ...
အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ Galaxy S3, S2, Note2ကို Root ကြမယ်
အိုင်ပက် (iPad) အသုံးပြုနည်း (အပိုင်း-၂)
အိုင်ပက် (iPad) အသုံးပြုနည်း (အပိုင်း-၁)
Thai Phone (i-Style Series) များ Root လုပ်နည်း
Sony Tablet P အား အလွယ်တကူ root ဖောက်နည်း
SmartPCFixer 4.2 Full Version (4MB )
Samsung Galaxy Ace Rooting
Huawei U8825-1 ကို root လုပ်နည်း
Right Click ထောက်ရင် Open With မပေါ်တဲ့ပြဿနာဖြေရှင်...